Sidee Loogu Darsadaa Websaydhkayga Koontadayda Ganacsi ee Pinterest? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideen ugu dari karaa degelkeyga koontadayda ganacsiga Pinterest?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 419
Haddii aad ka mid tahay bulshada ganacsiga dalwaddii ah, waad ogtahay muhiimada ay leedahay fulinta maaraynta iyo kor u qaadida sumaddaada Iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada, hadda mid ka mid ah barnaamijyada shabakadaha bulshada ee siiya faa'iidooyin badan kuwa u heellan suuqgeynta websaydhka waa Pinterest.
Codsigan labadiisa nooc wuxuu ku siinayaa noocyo badan oo beddelaadyo cusub ah marka aad leedahay ganacsi meherad ah, tan taxane ah oo hawlaha Haddii aad taqaanid sida saxda ah ee loogu adeegsado, waxay kaa caawin doonaan hab muhiim ah oo lagu soo jiito macaamiisha cusub iyo dabcan kobaca ganacsigaaga. Marka xigta, waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo ku caawin kara.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee lahaanshaha meherad dalwaddu ku siiso waa tan awood u leedahay inaad si hufan u maamushoIlaa iyo intaad ku abaabulan tahay maamulkan, maahan oo keliya in meheraddu ay tahay mid macmal ah oo micnaheedu yahay inaadan ka warqabin maalin kasta, liddi ku ah, waa inaad ka warqabtaa ficil ahaan maalinta oo dhan.
Pinterest waa aalad aad u faa'iido badan markay tahay maaraynta astaanta iyo kor u qaadista iyo alaabada la suuq geeyo.
Ugu horreyntii waxaad ku leedahay koonto ganacsi barta Pinterest, markaad haysato astaanta, ganacsi ee shabakadan bulshada, waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho faa'iidooyinka ay leedahay. Abuuristu waa wax iska fudud oo nidaamka Pinterest ayaa talaabo talaabo ah iyo qaab fudud kuugu sheegi doona waxa ay tahay inaad sameyso.
Kudar Pinterest websaydhkaaga:
Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka aan horay u soo sheegnay waana caawimaad weyn waqtiga suuq-geynta waadna awoodaa ku samee laba siyaabood:
Hawlgalkan waa inaad ka soo qaadataa kombuyutarkaaga, nidaamka ayaa ka fudud. Waxa ugu horreeya waa in la galo barta Pinterest. Sidaad had iyo jeer sameyso, magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah.
Xulo astaanta ee soo bandhigaya xulashooyinka menu-ga, markii la soo bandhigo, geli goobaha koontada oo xulo qaybta loogu talagalay in lagu xiro websaydhkaaga, oo guji astaanta isku xidhka.
Ku dar cinwaanka HTML tag, ku nuqul qaybta u dhiganta oo riix sii wad.
Websaydhkaaga tag faylka oo ku dar calaamadda halkan, marka hore qaybta "madaxa" ka dibna "jirka".
Ku noqo boggaagailaa Pinterest, oo xulo xulashada dirista. Hubi inay wax walba ku fiican yihiin sumadda meta, haddii ay sidaas tahay, waxay si otomaatig ah ugu xirmi doontaa boggaaga.
Xaaladdan oo kale hawshu waa sida soo socota, gal barxadda Pinterest. Sidaad had iyo jeer sameyso, magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah.
Xulo astaanta kaas oo soo bandhigaya xulashooyinka liiska, markii la muujiyo, geli goobaha koontada, xulo qaybta si aad ugu xirto websaydhka, nuqul cinwaanka HTLM oo u sii wado saxaafadda.
Faylka faylka Qeybta loogu talagalay shaqadan, soo dejiso oo sii wado sii wad.
Mar labaad faylka geli Markan galka galka ee serverka, dib ugu laabo barta Pinterest oo u dir.
3 Kudar Pinterest websaydhkaaga:
4 Faylka HTML:
Sideen ula wadaagi karaa fikradaha Pinterest?
Sideen ugu heli karaa hawlgal dheeri ah Pinterest?